Igwe pellet ahịhịa na -enyere Harbin Ice City aka imeri “Blue Sky Defense War” | Kingoro
Igwe pellet ahịhịa na -enyere Harbin Ice City aka imeri "Blue Sky Defense War"
N'ihu ụlọ ọrụ na -emepụta ike nke biomass na Fangzheng County, Harbin, ụgbọ ala kwụụrụ n'ahịrị ibuga ahịhịa n'ime osisi.
N'ime afọ abụọ gara aga, Fangzheng County, dabere na uru akụ ya, webatara nnukwu ọrụ nke "Straw Pelletizer Biomass Pellets Power Generation" iji dozie.
N’afọ 2021, a ga -agbanyụ ọrụ ọkụ ọkụ na -acha akwụkwọ ndụ, yana ihe mgbaru ọsọ a tụrụ anya ya, iji nyere Harbin Ice City aka imeri “Blue Sky Defense War”.
“Broker” site na yinye ụlọ ọrụ okirikiri okirikiri
“Ndị na-ere ahịa ahịhịa 'na ala ojii ga-emerịrị ka ahịhịa ahịhịa bụrụ ihe bara uru.
N'afọ a, Li Renying zụtara ebe a na -edobe ahịhịa ma mepụta ụgbọ mmiri na -ebugharị. N'okpuru nzukọ ya, a na -akwakọba tọn iri puku iri na abụọ nke sitere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ hekta 30,000 nke osikapa dị na Baoxing Township wee pụọ n'ọhịa.
Ọ dịghị ndị obodo ahụ mkpa isetịpụ aka ha na enweghị mgbali, ahịhịa wee pụọ n'ọhịa ịkwadebe maka ịkọ mmiri. A hụzịghị anwụrụ ọkụ sitere na ahịhịa ahịhịa n'ime ime obodo, gburugburu ebe obibi na -akawanye mma. Ịbụ "onye na -ere ahịa" maka ahịhịa wetara Li Renying ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị puku yuan 200.
Ime ka ọrụ ugbo na sayensị na teknụzụ na -eme ka ahịhịa nwekwuo ohere. N’afọ 2019, na -adabere na teknụzụ ntụgharị ume ọkụ biomass dị elu, ọrụ “Biomass Power Generation”, otu n’ime ọrụ 100 kacha ukwuu na mpaghara ahụ, biri na Fangzheng, na owuwu ụlọ ọrụ ọkụ na -ekpo ọkụ nke na -eji ahịhịa dị ka mmanụ ọkụ maka imepụta ike na a malitere ikpo ọkụ.
"Enwere ike iji ahịhịa mee ihe dị ka icheku ọkụ, ọ dịkwa mma na gburugburu ebe obibi." Na Disemba 1, 2020, ejikọtara ọrụ ahụ na grid maka imepụta ọkụ. Li Renying binyere aka na nkwekọrịta ọkọnọ ahịhịa na ụlọ ọrụ tupu oge wee bụrụ onye na -ere ahịa ahịhịa.
“Maka ibé ndị na -adịghị mma maka ịrụ ọrụ ugbo, enweghị ike ịgbaji ahịhịa wee laghachi n'ubi. Ọ bụ anyị ka ọ dị n'ịdapụ na ịpụ n'ubi, na -ebuga ya na ụlọ ọrụ ọkụ maka ịnabata na ịtụle ya, wee jiri ya maka ike ọkụ na ọgbọ ọkụ. " Li Renying gwara anyị na n'agbanyeghị na ike gwụrụ ya, ahịhịa ya zuru oke. Itinye n'ọrụ bụ ụlọ ọrụ ọwụwa anyanwụ ma nwee ezi uche. "Ka anyị na -ahụ na mbara igwe na -achapụ agbachapụ na mmiri doro anya n'obodo m, anyị nwere obi ụtọ." Li Renying nwetakwara nganga dị ka “onye na -ere ahịhịa”.
"Kemgbe nrụpụta ọkụ na-ejikọ ọkụ eletrik, ụlọ ọrụ ahụ azụtala ihe karịrị tọn 100,000 nke akụrụngwa biomass dị ka ọka, ahịhịa osikapa, ahịhịa osikapa, wdg, iji mepụta ọkụ eletrik dị nde kilowatt 7.7." Onye nrụpụta ụlọ ọrụ Fangzheng County Biomass Power Generation Company webatara ya.
Nkwupụta ọrụ gọọmentị Fangzheng County nke afọ a rụkwara aka na ọ dị mkpa ịkwalite ọganihu ọhụrụ na -ewu gburugburu ebe obibi, na -akwalite "mpaghara gburugburu ebe obibi", jiri nwayọ mepụta mmepụta ndụ ndụ na ibi ndụ, ma na -abawanye itinye n'ọrụ nke akụrụngwa. ike.
Ike ndụ ndụ nke igwe pellet ahịhịa nyeere Harbin Ice City aka imeri "Blue Sky Defense War".
Oge nzipu: Apr-09-2021
Onye na -akụ osisi, Belt akwagharị Hammer Mill, Nri anụ ụlọ Pellet Mill, Ogige osisi Chippers, Igwe egweri N'ihi osisi, Pellet igwe na -eri nri anụmanụ,